Parlemantera Ankolafy Ravalomanana : mampaneno lakolosy amin’ny SADC – MyDago.com aime Madagascar
Tonga amin’ny zavatra tsy azo leferina, tsy zaka ny atao fakofakom-panjakanafotsiny, hoy ireo mpikambana ao amin’ny CT Ankolafy Ravalomanana, raha nitondra fanazavana teny amin’ny foiben’ny TIM teny Bel’air.Mikasika ny nisintahan’izy ireo tamin’ny fandinihana ny volavolan-dalànan’ny famontsoran-keloka . Nambaran’izy ireo tamin’izany fa ny Talata no tonga teny anivon’ny parlemantera ny volavolan-dalàna momba ny famontsoran-keloka. Tsy nandalo teo anivon’ilay vaomierana iombonanan’ny andrim-panjakana anefa izany. Raha ny tokony ho izy hoy Raveloson Constant dia mandalo ao amin’io vaomiera io izany. Rehefa nahita ilay volavolan-dalàna anefa izahay dia nahatsikaritra ny lafiny teknika tsy mifanaraka amin’ny sehatra iraisam-pirenena, nefa asaina misolantsolana handany azy. Tsy mitovy ny tao amin’ny governemanta ny volavolan-dalàna nalefa teny amin’ny parlemantera. Ankoatra izay, hoy izy ireo, dia misy ny andininy milaza ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona voalaza ao, kanefa notsoahana tao ny mikasika ny fandoroana olona sy fananam-pirenena. Dikan’izany, hoy ireto CT Ankolafy Ravalomanana ireto, dia azo atao izany manomboka izao ny mandoro olona sy fananam-pirenena. Tsy azo ekena ny toy izany hoy izy ireo. Ny tondrozotra no nanendrena anay teo, ary izahay parlemantera no nandany izany ho lalàna. Noho izany dia tokony hajaina izay, fa tsy ampanaovina zavatra tsy mifanaraka amin’ny izy. Zarao amin’ny CT ilay « memoradum », fa io no mametraka hoe izao no izay. Aleo mihitsy miara mihaona amin’ny “expert” n’ny Sadc handinika io volavolan-dalàna io. Manoloana izany dia manaitra ireo mpkambana rehetra ao amin’ny CT sy CST izy ireo, fa heverin’ny sasany fa ombalahy tanimanga fotsiny. Namafisin’ireto olomboatendry ireto, fa miato tsy handray anjara amin’ny fandinihana ny famontsoran-keloka ny parlemantera Ankolafy Ravalomanana, raha tsy misy antoka mazava hizorana amin’ny tokony ho izy ny raharaha.Manomboka izao dia tsy hangina izahay.
Salazalahy Tsianihy : famerenana ny Filoha Ravalomanana ny amnistia
3 réflexions sur « Parlemantera Ankolafy Ravalomanana : mampaneno lakolosy amin’ny SADC »
10 avril 2012 à 9 h 00 min
Tena ombalahy tanimanga tokoa ianareo satria na ny olona tompoinareo aza tsy fantatrareo akory na hinianareo hikipiana ny famonoana malagasy sy fangalarana ny harempirenena izay nataony, koa mahatsapa tena dia miala raha tena lehilahy. ary aza miray tsikombakomba amin’ny de8.
10 avril 2012 à 16 h 09 min
Ovao ny pseudo fa wine Behhhhhhhh
Précédent Article précédent : Fanatera Longin : ataovy mifanaraka amin’ny tondrozotra ny amnistia
Suivant Article suivant : Nampiaka-peo ireo minisitry ny Ankolafy Ravalomanana